भारतले बनायो उड्ने कार ! - Janakhabar
भारतले बनायो उड्ने कार !
काठमाडौ । भारतको भिनाटा एरोमोबिलिटी कम्पनीले भारतको चेन्नईमा हाइब्रिड फ्लाइङ कारको निर्माणमा जुटिरहेको खुलाएको छ । यस बारे धेरै सूचनाहरु बाहिर आएका छन् । यो कारका लागि गुड्ने सडक वा उड्नका लागि रनवेको आवश्यकता नपर्ने कम्पनीले दावी गरेको छ।
कम्पनीले यो कार नागरिक उड्डयन मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धियालाई देखाएको थियो। कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक यूट्युब च्यानलमा गत अगस्ट १४ मा ३६ सेकेन्डको भिडियो अपलोड गरेको थियो।
अन्तरिक्षमा चलचित्र छायाङ्कन !